Sehatra R&D tonga lafatra
Ivon-toeram-pikarohana momba ny fanafody naorina, manana tobim-pifandraisana finday post-doctoral, mampiditra ny loharanon-karena feno, manafaingana ny fivoaran'ny tetikasa, manatsara ny fandaharam-pampandrosoana ny tetikasa.
Ekipa R&D marindrano avo
Noho ny ekipa R&D avo lenta miaraka amin'ny120olona, ​​anisan'izany49mari-pahaizana ambony indrindra,59diplaoma, ary18injeniera zokiny.
Fampiasam-bola R&D mitohy
Ny fampiasam-bola R&D dia mandrakotra ny volan'ny varotra 8% isan-taona, ary nanolotra fanohanana ara-bola tsy tapaka amin'ny fampirisihana ny talenta R&D avo lenta sy ny fanavaozana ny fitaovana R&D.
Taratasy fikarohana sy fampandrosoana mazava
Ny R&D mitambatra ho an'ny API sy ny famolavolana, dia nanangana sehatra R&D famotsorana lava;mampivelatra ny tombony amin'ny API R&D, fanamby ny patanty ary manangana sakana ara-teknika.
Misafidiana tetik'asa R&D API izay manana tsena mampanantena, tsy dia misy orinasa R&D mandray anjara, sarotra be amin'ny synthesis.
Famaranana ny fisoratana anarana DMF amin'ny martsa 2021
Famaranana ny fisoratana anarana DMF amin'ny Jona 2021
Famaranana ny fisoratana anarana DMF amin'ny Oktobra 2021
Famaranana ny fisoratana anarana DMF amin'ny Desambra 2021
Hatramin'ny 1984, dia nankatoavin'ny US FDA audit ny16fotoana, anisan'izany ny API13fotoana, ary ny dosages vita3fotoana.
Rosuvastatin Doxycycline Capsule
Fanaraha-maso mahazatra Nantong Chanyoo
Changzhou Pharma.Insepction mahazatra
Levethracetam tablette famotsorana maharitra
Ny fampiasam-bola mitohy sy miitatra dia manosika ny momba ny fitaovana famokarana sy ny fanavaozana mandeha ho azy, izay namolavola ny fahombiazan'ny famokarana, niantoka ny fahamarinan'ny kalitaon'ny vokatra, nahatratra ny fitantanana mahia sy ny fihenan'ny vidiny ary ny fitomboan'ny tombony.
Ny famolavolana maty manokana dia niantoka ny fotoana fitazonana fanerena avo roa heny, ny fahamendrehana ambony kokoa, ny hamafin'ny chip tsara kokoa ary ny mari-pahaizana brittle.
Ny endriky ny kalitaon'ny vokatra dia voamarin'ny voamaina amin'ny hafainganam-pandeha 100,000 sekely / ora, ary ny fanafoanana marina dia 99,99%.
Nohatsaraina ny haavon'ny automatique amin'ny famokarana atrikasa API, ny fampihenana ny fikarakarana ny asa sy ny vidiny, ary ny fanamafisana ny kalitao.